Weydii Hadda Dib u Eeg | Akhrinta maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Weydii Imtixaanka Hadda
Dib-u-eegis Weydii Weydiiso
Weydii waa shabakad maskaxeed oo cabsi badan waxayna shaqaaleeysaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican maskaxda iyo akhristayaasha kaararka tarotka ee qaranka. Weydii Hada Hada waa shabakada kaliya ee aan dib u eegnay ee iyaduna bixisa akhriska Isbaanishka iyo sidoo kale Ingiriisiga. Waxay aad u hubiyaan inaad ku qanacsan tahay akhriskaaga maskaxda oo ay ku siinayaan dammaanad 100% lacag celin ah. Haddii aadan ku qanacsaneyn si fudud ula xiriir kooxda taageerada macaamiishooda waxayna kuu soo celin doonaan lacagtaada, wax su'aalo ah lama weydiin. Waan isticmaalaa Weydii had iyo jeer wixii talo ah, waxaanan ogaaday in siciradoodu ay ahaayeen kuwa ugu fiican uguna wanaagsan heshiiska guud ahaan.
Weydii wuxuu ku jiray ganacsi dhowr sano wuxuuna ka mid ahaa adeegyadii ugu horreeyay ee Maskaxeed ee bilaabay inuu ku bixiyo adeegyo khadka tooska ah. Waqtigan xaadirka ah waxaa iska leh oo ka shaqeeya Florida sidaa darteed waad hubin kartaa inaad heleyso shirkad aad ku kalsoon tahay, oo aanad ka helin shirkad dibedda ah. Ku qanacsanaanta macaamilku aad ayey u sarreysaa oo dhowaan ayey cusbooneysiiyeen nidaamkooda si aad ula hadasho la-taliyaha aad rabto, xitaa haddii ayan isla markiiba heli karin. Waxaad gashaa lambarka taleefankaaga nidaamka ayaa kugu soo wacaya isla marka la helo. Waxay bixiyaan faa'iidooyin badan oo yaryar oo ah in adeegyada kale ee maskaxdu aysan jeclayn horoscopes bilaash ah, iyo akhrinta sheekaysiga ee internetka.
Nidaamka Kormeerka ee Cilmi-nafsiga
WeydiiNidaamka baaritaanka cilmi nafsiga waa wax cajiib ah. Qiyaastii 1 ka mid ah 10 maskaxeed ee khuseeya ayaa la shaqaaleeyaa. Cilmi-nafsiyeed cusub oo khuseeya ayaa la siiyaa wareysiyo dhowr ah ka dibna awooddooda maskaxeed ayaa la tijaabiyaa. Cilmu-nafsiga waxaa lagu dhiiri-gelinayaa inay macaamiisha ku farxaan, iyo haddii ay cabashooyin badan ka helaan Weydii uma oggolaan doonno inay mar dambe akhriyaan.
Recently Weydii cusbooneysiiyay boggooda waana inaan dhahaa way ka fiican tahay sidii hore. Waxay ku dareen muuqaal cusub oo la yiraahdo "dib u soo wac" oo aan runtii jeclahay. Aynu nidhaahno maskaxdaada aad jeceshahay waa khadka tooska ah laakiin lama heli karo. Waad geli kartaa lambarka taleefankaaga maskaxda ayaa si otomaatig ah kuugu soo wici doonta isla marka ay diyaar noqdaanba. Dhab garaac garaac sugaya maskaxdaada aad ugu jeceshahay. Websaydhada cusubi way fududahay in la isticmaalo, dhakhso runtiina waxay kaa caawineysaa inaad hesho maskax wanaagsan.
Isbedelada Macaamiisha Cusub
Weydii wuxuu leeyahay heshiis weyn macaamiisha cusub. Ku hel 15 daqiiqo kaliya $ 10. Waxay sidoo kale bixiyaan akhrinta iimaylka bilaashka ah ee bogga, inkasta oo ay qaadato dhowr maalmood si loo helo jawaab waa taabasho fiican. Waxaan kugula talineynaa inaad iska qorto joornaalkooda toddobaadlaha ah ee rasiidhada iyo qaar ka mid ah horoscopes runtii aragti leh.
WeydiiKooxda adeegga macaamiisha wey fiican tahay. Waxay haystaan ​​damaanad qaad lacageed markaa haddii aadan ku qanacsaneyn waxaad dalban kartaa lacag celin. Iyagu ma bixiyaan lambar taleefan taageero macaamiisha ah oo niyad jab leh, laakiin kooxdooda taageerta emaylka waxay uga jawaabeen dhibaatooyinkeyga daqiiqado yar gudahood, mar walbana waxay awoodeen inay si dhakhso leh u xalliyaan dhibaatooyinkeyga.